Ozi kacha ọhụrụ banyere ndị isi obodo si Nigeria & ụwa | TAA
Ndị na-eme mkpebi na-ekwu okwu banyere ihe dị ka nde mmadụ $ 496 nke Buhari
Senator Melaye: Senate na-enwe obi ụtọ IGP Ibrahim Idris na TV ndụ
Ụlọikpe na-eme ka nhoputa ndi nhoputa ndi ochichi kwadoro iwu
Ndị gọọmentị na-ezukọta na Paris ụgwọ ọrụ nkwụghachi, akwụkwọ stampụ, ndị ọzọ
Deontay Wilder nyere Anthony Joshua $ 50m maka heavyweight mega-ọgụ
Home Tags Ndị ọchịchị Federal
Ndị ọchịchị Federal
Oge maka gọọmenti etiti gọọmentị APC chere
Nke a bụ oge maka Ọganihu Ndị Nwee Ọganihu niile (APC) Gọọmentị Fọịịchị ga-edozi ma tụgharịa. M na-eche echiche banyere ọdịda ha na gọọmentị.
Onye isi oche nke otu obodo, Bukola Saraki, na-agba akwụkwọ na Wednesday, gụrụ akwụkwọ ozi si n'aka President Muhammadu Buhari na-achọ nkwado nke ndị omeiwu maka iwepụ $ 496m site na Akaụntụ Akụ na Ụzụ maka ịzụta ụgbọelu agha.
Deontay Wilder gwara Anthony Jọshụa na "ego ahụ dị n'akpa ahụ" dịka atụmanya bilitere na Wednesday nke mba ụwa na-ejikọta ọnụ n'etiti oké egwu.
Inweta nkwekọrịta banyere onye nwatakịrị nọ na Nigeria bụ ihe ịma aka siri ike bụ nke nwere ike imebi mkparịta ụka ọ bụla gbasara nke a.
Iwe agba na Senate na Wednesday mgbe ndị omekome gbara ụka banyere njide na njide nke Senator Dino Melaye site na ndị uweojii na-etinye aka na egbe na-agba ọsọ.
Ụlọikpe Kasị Elu Federal na Abuja na Wednesday mere ka Bill Nọọmenti nke Iwu Mpụ (Ndezigharị Iwu), 2018, chọrọ ịchọpụta iwu nke Nọọmenti Independent National Electoral Commission ga-eduzi nhoputa ntuli aka niile nke 2019.
#BBNaija: Ọrụ ebube bụ onye mmeri nke mbipụta 2018
Mgbe otu izu iri na otu gafere azụ azụ, Ebube aghọwo mmeri nke mbipụta 2018 nke ngosi Nkiri Nwanna Naija.
Israel na-ekpochapụ Mossad na-ekwu Mosisad n'azụ mgbu mmadu
Onye na-ahụ maka nchebe nke Israel na Sunday na-ekwu na onye ọrụ nledo nke mba ahụ bụ mgbe e gburu onye ọkà mmụta sayensị Palestian na Malaysia, na-ekwu na kama igbu ya bụ "ịhazi ihe ndekọ".
Ụgha: Onye ọka iwu na-ebute ikpe dịka Innoson na-agbanyeghị iwe maka oge nke anọ
Onye isi oche nke Innoson Motors Nigeria Ltd., Innocent Chukwuma, maka oge nke anọ, mere ka ọ pụta n'ihu ụlọ ikpe maka njide ya.
Gọọmentị Federal họpụtara ndị nduzi ahụike maka FMC isii
President Muhammadu Buhari Tuesday n'abalị kwadoro nhọpụta nke ndị Ọgwụ Nlekọta Ọhụrụ abụọ na nhọghachi nke mmadụ anọ ọzọ na Ụlọ Ọrụ Ahụ Ike Federal.
Ọrụ GỊ na-eme CLO Gick Dickson mgbe a họpụtara ndị ikpe
Òtù Mba Ndị Na-ahụ Maka Onwe Ha (CLO), na State Bayelsa, ejirila Gọvanọ Seriake Dickson mee ihe, iji leba okwu ikpe na-abawanye anya nke ụlọ ikpe na-enweghị isi na ikpe ikpe n'ihi ụkọ ndị ikpe na steeti.